Creative Writing » ဆိုင်းဘုတ် . . .	2
ညနေကတည်းက ကြားနေရသည့် ဆုတောင်းစကား ည ၁၁ နာရီကျော်သည်အထိ မပြီးနိုင်သေး။ – – – – – = – – – – – –
kai says: ကြား၃ကြားမ၀င်ရတဲ့.. ရှေးလူကြီးတွေပြောတာ…။
Thint Aye Yeik says: ကျနော်လည်း အခု လူကြီးဗျ….
ငယ်တော့တာမှ မဟုတ်တာ..။ ကျနော်တော့ သူငယ်ချင်း သမီးရည်းစား ကြားထဲ တစ်ခါလေး ဝင်မိပါတယ်။ ပြသနာ တစ်ခါ ရှင်းလိုက်ရပြီးကတည်းက နောက်ဆို…ဝေးဝေးက ရှောင်တယ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.